Maitiro ekuisa akawanda akawanda ekutumira maDomains mune yako SPF Record | Martech Zone
Maitiro ekuisa akawanda akawanda ekutumira maDomains mune yako SPF Record
China, January 14, 2021 Muvhuro, Kukadzi 7, 2022 Douglas Karr
Takakwidza tsamba yedu yevhiki nevhiki (iva shuwa kusaina!) uye ndakaona kuti yedu yakavhurika uye nekudzvanya-kuburikidza nemitengo yakadzikira. Mikana ndeyekuti mazhinji emaemail aya haasi kuitisa kuinbox zvachose. Chimwe chinhu chakakosha ndechekuti isu taiva ne SPF rekodhi - DNS mameseji rekodhi - izvo zvaisaratidza kuti yedu nyowani email service provider aive mumwe wevatitumira. Vanopa masevhisi eInternet vanoshandisa rekodhi iyi kuratidza kuti domain yako ine mvumo yekutumira email kubva kune iye anotumira.
Sezvo domain yedu ichishandisa Google Apps, tanga tatoita Google kumisikidza kare. Asi isu taida kuwedzera yechipiri duraini. Vamwe vanhu vanoita chikanganiso chekuwedzera yakawedzera rekodhi. Haisi iyo mashandiro ayo, iwe unofanirwa kuve nayo vese vanotumira mvumo mune imwechete SPF rekodhi. Heano maitiro edu ePSF rekodhi yazvino kugadziridzwa nezvose Google workspace uye Circupress.
martech.zone TXT "v=spf1 inosanganisira:circupressmail.com inosanganisira:_spf.google.com ~all"
Izvo zvakakosha kuti ese madomasi ari kutumira maemail panzvimbo yako akanyorwa mukati meSPF rekodhi, kana zvimwe email yako inogona kunge isiri kugadzira inbox. Kana iwe usingazive kana yako email sevhisi sevhisi yakanyorwa pane yako SPF rekodhi, ita an SPF kutarisa kuburikidza neMXToolbox:
Ramba uchifunga kuti, mushure mekushandura rekodhi yako yeTXT neruzivo rweSPF, zvinogona kutora maawa mashoma kuti maseva edomasi ashambadzire shanduko.
Tags: 250okeemail kuburitswayakawanda dura spfyakawanda spf rekodhispf kutarisaspf rekodhispf rekodhi yekutarisa